Madaxweyne Farmaajo oo kulan isugu yeeray Xisbiyada Siyaasadda ee heysta Shahaadada KMG – Banaadir Times
By banaadir 23rd November 2019 242
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa saacadaha soo socda kulan la yeelan doona Xisbiyada Siyaasada ee heysta shahaadada KMG.
Sida wararku sheegayaan kulankan ayaa noqon doona kii u horeeyay ee Madaxweyne Farmaajo la qaato Inta badan Xisbiyada siyaasadda ee dhowaan uu diiwaan geliyay Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka.
Farriimo laga diray Madaxtooyada ayaa lagu wargeliyay Xisbiyada Siyaasadda inay isugu yimaadaan kulan uu Madaxweyne Farmaajo la qaadan doono, kaasoo dhici doona subaxnimada hore ee Sabtida
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu kala hadli doona Xisbiyadan arrimaha siyaasadda, gaar ahaan hannaanka doorashooyinka oo dowladda Federaalka dooneyso in la qaato nidaamka doorasho ee qof iyo cod ah.
Xisbiyada la filayo inay kulanka ka muuqan doonaan ayaa waxaa ka mid ah Xisbiyo lagu tiriyo inay u janjeeraan dhanka dowladda oo muddooyinkii u dambeeyay taageero u hayay.
Dadka odorasa siyaasadda ayaa sheegaya in kulanka Madaxweyne Farmaajo iyo Xisbiyada siyaasadda uu yahay mid indhaha looga jeedinayo kulankii Arbacadii uu la yeeshay Madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, oo aan kaliya la dhihin in Madaxweynuhu la kulmay Madaxdii hore ee hoggaamiya Xisbiyada siyaasadda, isla markaana kulamada lagu soo daro Xisbiyada kale.